အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား, Metro Marmaray အခမဲ့ Minden အတွက် Bayram? အဆိုပါအနစ်နာခံ 2019 အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်း၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ? - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကား, Metro Marmaray အခမဲ့ Minden အတွက် Bayram? အဆိုပါအနစ်နာခံ 2019 အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်း၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ?
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, ကြိုးဆွဲရထား, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
သငျသညျဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်စားသောက်ခဲ့ကြ, မြေအောက်ရထား marmaray အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့ဟယ်လိုသားကောင်ကိုသင်လုပ်ခဲ့တယ်
အဆိုပြုချက်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်, အနစ်နာခံ၏ပွဲနှင့်အတူ 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသငျသညျအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။ IETT, နိုင်ငံသားများအတွက် IMM သားကောင်ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေအချိန်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), နိုင်ငံသားများ၏အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာခံရသောပွဲဖြုန်းဖို့လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူခဲ့ပါတယ်။7/ 24 တာဝန်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အဆိုးမြင်အတွေးတွေရှောင်ရှားရန်ယဇျပူဇျော IMM သင်း၏ပွဲခံစဉ်ကာလအတွင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများပွညျ့စုံစတင်ပါလိမ့်မယ်။
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluဇူလိုင်လအတွင်း 11 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံအစည်းအဝေး၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာ, သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့များတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အနစ်နာခံ 30 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပွဲသူကအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ CHP နှင့် AK ပါတီအုပ်စုတစုတညီတညွတ်တည်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကအတည်ပြုခဲ့ပူးတွဲ resolution ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။
အဆိုပါအမိန့်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သြဂုတ်လနှင့်သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြားအနစ်နာခံ၏ပွဲနှင့်အတူ 11-14 30 သင်သည်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။
ခရီးသည်များ istanbulkart ပေါင်းစည်းမှုတွင်ထည့်သွင်းကဒ်ကိုဖတ်မှအားလုံးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြင်းဖြင့်စီးအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ လုပ်အားခစရိတ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်၏အားလုံးထံမှတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလိမ့်မည်။ ယနေ့တွင်လည်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အပိုဆောင်းအချိန်ရှိရလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာ; ဘတ်စ်ကား Inc ကို (လေဆိပ်ဘတ်စ်ကား), ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကား, စီးတီး Lines ကူးတို့, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလိုင်းများအတွက်ခိုင်လုံသောဖြစ်လတံ့သော Metro အစ္စတန်ဘူလ်က Metro, ကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာကညွှန်ကြားထားအထူးအဏ္ဏဝါအဝေးပြေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအင်ဂျင်ဓါတ်ရထား မှလွဲ. IETT, Metrobus ။
သူတို့ရဲ့သားကောင်လှီးဖြတ်တစ်ဝိုက်ထိန်းညှိရန် IETT လေယာဉ်ခရီးစဉ်
ဖြတ်တောက်ခြင်းဧရိယာကဖန်တီးသားကောင်များများအတွက်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောင်းအား IMM ရဲ့ဥရောပနှင့်အာရှနှစ်ဖက်, IETT ဒီအချက်ကနေနောက်ဆုံးလိုင်းဖန်တီးထားသည်။
IETT ဥရောပဘက်ခြမ်းKayaşehir / Esenyurt, Yeşilkent / မုဆိုး, Alibeyköy / Eyüpsultan, Çakmaklı / Büyükçekmece, Kestanelik / Çataca မှစ. , Anatolian ခြမ်းFerhatpaşa / Umraniye Paşaköy / Sancaktepe နှင့်Kurnaköy / Pendik အချိန်ဧရိယာဖြတ်တောက်သားကောင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။
Adana ဘတ်စ်ကားများနှင့် Metro အခမဲ့အတွက်အနစ်နာခံ၏ပွဲတလျှောက် 29 / 08 / 2017 Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က, သင်္ချိုင်းသို့သွားရောက်ဖို့စီစဉ်နိုင်ငံသားများတစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းအောင်ကောင်းစွာပြု၏။ အဆိုပါစည်ပင်သာယာဘတ်စ်ကားများ၏အကြိုခိုင်မာအောင်, Bluto, Asri, အKüçükobနှင့်Akkapıသင်္ချိုင်းအခမဲ့ Shuttle လုပ်ခံရဖို့ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ ဟောငျးပြည်နယ်, 07.30 မှာစတင်ပါလိမ့်မည် 17.30 သည်အထိဆက်လက်မည်သင်္ချိုင်းဘတ်စ်ကားမှသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ သင်္ချိုင်းမှာလမ်းလျှောက်အတွက်အခက်အခဲများရှိသည်သောနိုင်ငံသားများ, ယာဉ်မောင်းနှင့်စည်ပင်သာယာဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူဂေါက်သီးကားတစ်စီးနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မနက်စောစော Al-Adha ကာလအတွင်းယင်း၏အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘတ်စ်ကားနှင့်မက်ထရိုန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ အနစ်နာခံတစ်ဦးတည်း 153 အော်ပရေတာများ၏ပွဲစဉ်အတွင်းဆန္ဒ, တောင်းဆိုမှုများနှင့်တိုင်ကြားချက်များAdanalılarlaတာဝန်များ၏လိုင်း၏သက်ဆိုင်ရာယူနစ်မှပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
Adana အတွက်အနစ်နာခံအခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်းပွဲ 10 / 09 / 2016 Adana အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်းအတွက်အနစ်နာခံ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ: Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့လုပ်လိုလားသောအရပ်သို့သွားရလွယ်ကူသည့်မနက်စောစောနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မသွား။ Adana အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အနစ်နာခံ၏Adanalıနိုင်ငံသားများမေးခွန်းကိုမှဖြေကြားBayrmanıအစောပိုင်းအခမဲ့မိုင်သို့ရောက်ကြ၏။4တစ်နေ့တာအတွင်း Adana အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အားလပ်ရက်အခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအစ Adana တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်သင်္ချိုင်းဘို့ Shuttle မှနောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်စီစဉ်ပါ။
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိအခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစိတ်ထဲ Kurban Bayram 10 / 09 / 2016 အဆိုပါအနစ်နာခံအခမဲ့အောင်မင်း၏အစ္စတန်ဘူလ်ပွဲအတွက်ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, မနက်စောစောအယ်လ်လူတိုင်းလိုလားရှိရာတစ်ဦးထက်ပိုငြိမ်းချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ခံယူသူပိုမိုလွယ်ကူသွားဖို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ် 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သားကောင်များအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်နိုင်ငံသားများBayrmanı, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့မိုင်မေးခွန်းများကိုစောစောတုန့်ပြန်ရောက်ရှိလာသည်။4တစ်နေ့တာအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အားလပ်ရက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ပါလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သားကောင်များ၏ပွဲစဉ်အတွင်းမက်ထရို, လမ်းရထားနှင့်ကူးတို့က paid တစ်ဝက်အဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးဖြစ်လိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အနစ်နာခံ၏ပွဲ ISPARK လမ်းပညတ် ...
တူရကီထဲမှာအခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစိတ်ကိုမနက်စောစော Al-Adha 10 / 09 / 2016 တူရကီအတွက်မနက်စောစော Al-Adha အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးအောင်မင်း: အမနက်စောစောနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့အတွက်ပိုမိုငြိမ်းချမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သွားကြဖို့တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်, လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့လုပ်လိုလားသောအရပ်သို့သွားရလွယ်ကူ။ အတ္တဘတ်စ်ကားနေဆဲအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ တူရကီသားကောင်Bayrmanıနိုင်ငံသားများအတွက်တူရကီအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မေးခွန်းကိုအဖြေကိုအစောပိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။4တစ်နေ့တာအတွင်းတူရကီအတွက်အားလပ်ရက်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်။ တူရကီအခမဲ့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းအနစ်နာခံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မက်ထရိုနှင့်လမ်းရထား၏ပွဲစဉ်အတွင်း။ Başkentliler, အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းတောင်းဆိုချက်များနှင့်တိုင်ကြားမှုများ,7/ 24 153 တစ်ဦးတည်း, အားလပ်ရက်ဖွင့်လိုင်း, ရဲနှင့်မီးသတ်သမားထုတ်လွှင့် ...
မနက်စောစော Al-Adha Erzurum အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏ပထမဆုံးနေ့ရက်တွင် 17 / 08 / 2018 မနက်စောစော Al-Adha Erzurum အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပထမဆုံးနေ့ရက်တွင်အခမဲ့ရလိမ့်မည်။ ပွဲမြို့တော်မြူနီစီပယ်ဘတ်စ်ကား၏ပထမဆုံးနေ့, မြို့ပြနှင့် minibuses အတွက် operating ပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကား, နိုင်ငံသားများရွှေ့ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့်အလွယ်တကူမိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှု၏သဘောပေါက်စေရန်, ပွဲတော်များအိမ်ထောင်ဖက်မှာကောင်းစွာလုပ်ဖို့ Non-နိုင်ငံသားများအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအခွအေနေစဉ်းစား Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ 57 ပြီးနောက်ဗလီကနေမနက်စောစောဆုတောင်းပဌနာဆုတောငျးဖို့သင်္ချိုင်းမှဘတ်စ်ကားမှဖယျရှားခံရဖို့နိုင်ငံသားများအားဖြင့်လုပ်ရမည်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများအတွက်မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဟယ်လိုသင်္ချိုင်း။ ထိုကွောငျ့, မွို့၌အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးစဉ် 08.30 အဖြစ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်္ချိုင်းထဲမှာအဆင်သင့်ထားရန်သင်္ချိုင်းတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီးအပြီးပြန်သွားဖို့ကိုဆိုလိုသည်။ ...
သြဂုတ်လနှင့်အနစ်နာခံအခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏ပွဲများတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 30 09 / 08 / 2019 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, အနစ်နာခံ၏ပွဲ, အောင်ပွဲခံနေ့သြဂုတ်လ 309ကျောင်းကိုအပေါ်တနင်္လာနေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ၌ဖွင့်လှစ်ဖို့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, ဇူလိုင်2အတွက် IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğluရဲ့သမ္မတသက်တမ်း။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ session တစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးမှာ TV ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် IMM နှင့် IMM နှင့်အတူ Ekrem İmamoğluလူမှုမီဒီယာအကောင့်များအစ္စတန်ဘူလ်၏အစီအစဉ်အပေါ်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးကြခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ CHP နှင့် AK ပါတီသြဂုတ်လ 11 အပေါ်တစ်ဦးပူးတွဲအုပ်စု, အနစ်နာခံ၏ပွဲ (14-30 သြဂုတ်လ), အောင်ပွဲခံနေ့အဆိုပြုချက်များနှင့်အညီနှင့်9စက်တင်ဘာလ 2019 ကျောင်းများ 06 မှာတနင်္လာနေ့ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်: 00- 14: 00 အကြား ...
Konya အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မနက်စောစော Al-Adha ၏2ပထမဆုံးနေ့ 29 / 08 / 2017 Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မနက်စောစော Al-Adha ၏ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံသားများနှင့်ချောမွေ့စွာသုံးစွဲနိုင်ရန်လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူ။ ကြီးကြပ်မှု Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဌာနလက်အောက်တွင် Sales PLACE ၏သားကောင်များ, တခြားနေရာရောင်းအားကနေခရိုင်သားကောင်များအရောင်းနှင့်ခုတ်ရှအတွက်သားကောင်များဖော်ထုတ်, ထိုသို့ဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာခဲ့သည်။ အရောင်းနှင့်ရှသားကောင်များနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အသင်းများအတွက်တိရိစ္ဆာန်ဆရာကျန်းမာရေးနှင့်စာရွက်စာတမ်းစစ်ဆေးမှုများနေစဉ်; အရောင်းနှင့်စွန့်ပစ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုများစုဆောင်းခြင်းလျှော့ချသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများရှောင်ရှားခြင်းမှဖြစ်ပေါ်ခြင်း, သန့်ရှင်းခံရဖို့ရာဌာန၌လိုအပ်သောအစီအမံများကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အခမဲ့စစ်ဆေးရေးယဇ်ပူဇော်တိရိစ္ဆာန်များ Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ...
အဆိုပါအနစ်နာခံအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဗန်ပွဲ 17 / 08 / 2018 မြို့လယ်နှင့်ခရိုင်အတွင်းရှိမနက်စောစော Al-Adha စဉ်အတွင်းဗန်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, နိုင်ငံသားတွေအဆင်ပြေပြေနဲ့အဆင်ပြေစီးနင်းလုပ်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ (သြဂုတ်လအတွင်း 4, 21, 22 နှင့် 23) ကိုအနစ်နာခံ၏ပွဲကြောင့် 24 ရက်ပေါင်းတလျှောက်တွင်ဘတ်စ်ကား၏မြူနီစီပယ်အခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုကိုငါပေးမည်။ ဗန်အကြီးအကျယ်ဗန်၏လူများကိုယ်စားခရီးသွားလာနိုင်စေဖို့အပိုဆောင်းအချိန်စီစဉ်ဖို့အဆင်ပြေလမ်းအတွက်လိုအပ်သောအစီအမံများတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနိုင်ငံသားများ၏ရှားပါးမှု၏သင်္ချိုင်းများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသို့အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့သည်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Bursa သည်အနစ်နာခံခြင်းနှင့်အောင်ပွဲခံနေ့အခမဲ့အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 19 / 07 / 2019 Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မနက်စောစောတစ်ရက်ကြောင့် 11-14 သြဂုတ်လအကြားအရှည်၏လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ရလိမ့်မည်။ လည်းအောင်ပွဲခံနေ့ခေါ်ဆောင်သွား 30 သြဂုတ်လဆုံးဖြတ်ချက်သည်မြို့တော်ခရိုင်ကောင်စီများကတညီတညွတ်တည်းအတည်ပြုခဲ့ခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးညီလာခံဇူလိုင်လအတွင်းက၎င်း၏ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas အစည်းအဝေးတွင် receiver စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဘာသာရေးနှင့်အမျိုးသားရေးအားလပ်ရက်အခမဲ့ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်; သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကြားအနစ်နာခံသြဂုတ်လ 11-14 ၏ပွဲစဉ်အတွင်း Bursa လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့နေ့ကဖြစ်လိမ့်မည်။ အားလုံးနိုင်ငံသားတွေအဓိကအားပုဂ္ဂလိကဘတ်စ်ကားနှင့်အတူမြူနီစီပယ်အပါအဝင်အခမဲ့ရထားလမ်းစနစ်များမှအကြိုးပွုနိုငျရာ '' Bursakart '' တွင်။ အဆိုပါအနစ်နာခံ၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ ...
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မနက်စောစော Al-Adha 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေး 10 / 07 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, သြဂုတ်လ 21-24 ၏ရက်စွဲများအကြားအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အနစ်နာခံ 50 ရာခိုင်နှုန်းပွဲလျှော့န်ဆောင်မှုများပေးသွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံဟာ Sarachane အဆောက်အဦး၏ပေါင်းစပ်၏ဇူလိုင်လအတွင်း၎င်း၏ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပလျက်ရှိသည်။ IMM ညီလာခံ 1 ။ လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ Ahmet ကယ်တင်ခြင်း၏ဥက္ကဋ္ဌနေရာအောက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည့်အစည်းအဝေးတွင်အဆိုပါအနစ်နာခံ၏အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပွဲ၏ AK ပါတီနှင့် CHP အုပ်စုများ 50 ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ခံရဖို့အဆိုပြုချက်ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ ဆွေးနွေးကြသည်ကမ်းလှမ်းချက်အဖြစ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချဆုံးဖြတ်ချက်တညီတညွတ်တည်းကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်; အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ 21-24 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုသြဂုတ်လနှင့်လျှော့စျေးရေကြောင်းကနေကျန်ရှိသောကုန်ကျစရိတ်အကြားအနစ်နာခံ 50 ရာခိုင်နှုန်းပွဲလျော့ကြဘူး ...
အဆိုပါအနစ်နာခံ 2019 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့မိုင်၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ
Marmaray အခမဲ့လုပ် Mi
ဘတ်စ်ကား Inc က
Adana ဘတ်စ်ကားများနှင့် Metro အခမဲ့အတွက်အနစ်နာခံ၏ပွဲတလျှောက်
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိအခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေးစိတ်ထဲ Kurban Bayram
မနက်စောစော Al-Adha Erzurum အခမဲ့ပြည်သူ့ပို့ဆောင်ရေး၏ပထမဆုံးနေ့ရက်တွင်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မနက်စောစော Al-Adha 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေး